Maitiro ekurekodha vhidhiyo muDolby Vision HDR neiyo iPhone 12 | IPhone nhau
Maitiro ekurekodha vhidhiyo muDolby Vision HDR ine iPhone 12
Imwe yeanonyanyo kuzivikanwa eiyo nyowani iPhone 12 renji mukana wekurekodha 4K vhidhiyo netekinoroji Dolby Vision uye HDR. Iyo Cupertino kambani inozvirumbidza kuti iyi ndiyo yekutanga mbozhanhare inokwanisa kugadzira iyi mhando yekurekodha.
Nekudaro, iyo HDR Dolby Vision kurekodha pane iyo iPhone yakanga isipo isina matambudziko ayo mumazuva ayo ekutanga, chimwe chinhu chatakatsigira. Tinokuratidza maitiro aunogadzira HDR Dolby Vision kurekodha vhidhiyo pane yako iPhone 12 nenzira yakapusa. Saka iwe unogona kugadzira yakanyanyisa nyanzvi vhidhiyo zvinyorwa iwe zvaunogona kufungidzira.
Sezvatakambotaura, mukana wekurekodha 4K Dolby Vision HDR vhidhiyo inoenderana nemhando dzose idzi: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini uye iPhone 12 Pro Max. Nekudaro, inowirirana neDoby Vision HDR yakawanda yakawanda, senge Apple TV 4K, iPad Pro uye ese maPhones kubva kune yapfuura iPhone 8.
Nenzira iyi, isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu tichazokwanisa kunyora Dolby Vision HDR nekamberi kamera ye iPhone yedu 12, ehe, ivo vanozo chengetwa mu HEVC fomati mukati mekurangarira kwechigadzirwa. Zviripachena, ivo vachatora yakati wandei nzvimbo kupfuura zvakajairwa.
Nekudaro, isu tawana mamwe matambudziko kana tichigadzirisa mavhidhiyo muFinal Cut ayo akanyorwa muDolby Vision HDR, nekuti mafaera akashatiswa, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakagadziriswa pamwe nezvimwe zvidzoreso.
Gonesa / Regedza Dolby Vision HDR Kurekodha pane iPhone 12
Kugonesa uye kumisa kuita uku, isu tiri kungo tevera matanho atinoratidza:
Isu tinopinda iko kunyorera Zvirongwa kubva ku iPhone yedu
Tinotendeukira kune sarudzo Camera, kwatichawana masettings
Mukati mezvirongwa zvekurekodha vhidhiyo isu tinowana pazasi peiyo HDR (Yakakwira Kubudirira) vhidhiyo switch, izvi ndizvo zvatinofanirwa kudzora nekumisikidza
Uye ndiko kupusa kwatinogona kuita kumisikidzwa uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekurekodha vhidhiyo muDolby Vision HDR ine iPhone 12
L0vetodream inoona kuti Apple ine 'Kisimusi' chipo chakagadzirirwa gore rino
Vamwe vashandisi veApple 12 mini vanotaura zvikanganiso pakubata